🥇 Akaụntụ maka mmepụta uwe
Ikwu oke: 4.9. Onu ogugu nke otu: 613
Video nke aza ajụjụ maka mmepụta uwe
Nye iwu maka ịkọ uwe
N'ime usoro nyocha nke imepụta uwe, ọ ga-adaba adaba iji rụọ ọrụ na thentanetị yana ọtụtụ ụlọ nkwakọba ihe na ngalaba dị iche iche, jikwaa ma mepụta ngagharị niile nke ngwaahịa. Ọ dị mma na ngwa ngwa iji gbakọọ mbipụta nke ụgwọ ọrụ ego maka ndị ọrụ nke mmepụta uwe. Echefu banyere ngụkọta oge ngụkọta oge na-eche na ịma mma nke na-aza ajụjụ mmemme nke uwe mmepụta. Inggụ ego maka itule, nyefee ọnụahịa nke ịzụta ihe ụfọdụ na ngwa na-abịa na njedebe na oge, yana ngwa ahịa na-adị mfe na ngwa ngwa; data na ụlọ nkwakọba ihe bụ USU Software na-echekwa. Usoro nke imepụta uwe na-eme atụmatụ site na ụbọchị dabara adaba ma nyefee nke iwu ahụ, ịcha na ịkwa akwa nke ngwaahịa a ga-adaba adaba. Usoro nke ịgbakọ akwa, ngwa na ihe ọ bụla dị mkpa iji mepụta ngwaahịa na-adị mma. Na mbụ, ị ga-eji aka gị gbakọọ ọnọdụ ọ bụla achọrọ iji mepụta ngwaahịa.
Ngwa nyocha nke imepụta uwe na-agbakọ ọnụahịa nke otu ngalaba mmepụta. Maka njikwa, ụgwọ a na-akwụ bụ usoro dị ezigbo mkpa. Usoro ihe omume nke imepụta uwe nwere ike gbakọọ atụmatụ ọnụahịa nke ngwaahịa ndị gwụchara ma jiri aka ya dee ihe ndị na-eri ihe. A na-eme usoro ego na nhazi mbụ, nke ị na-enwe mmasị ịrụ ọrụ ma ọ na-atọkwa anya ụtọ. Izipu akwụkwọ dị iche iche nye ndị ahịa site na email na-aghọkwa ọnụ ọnụ na ngwa ngwa. You nwere ike ịmepụta usoro nyocha nke kọntaktị na adreesị nke ndị ahịa gị na ndị ọrụ gị na ihe gbasara sekọnd ịchọta data na ibe ọ bụla. Ikike izipu ozi gbasara mgbanwe dị iche iche na ụlọ ọrụ na-emepụta uwe gị na-adị, mgbanwe na adreesị ma ọ bụ kọntaktị, ego, mbata nke ngwaahịa ọhụrụ. Jiri ndetu nzipu ozi olu iji gwa ndị ahịa banyere ozi dị mkpa, ịtụ njikere, usoro ịkwụ ụgwọ, na ihe ọ bụla ọzọ dị mkpa.
Rụ ọrụ na teknụzụ nyocha ọhụụ na - eme ka uwe gị mepụta uwe dị ka ụlọ ejiji kachasị mma na ọgbara ọhụrụ. N'iji usoro mmemme anyị nke imepụta uwe, ị nwere ike ikpokọta ọrụ nke ngalaba gị dịka otu usoro niile. Iji mepụta gallery na arụchaala ọrụ gị, naanị ị ga-ese foto site na iji igwefoto weebụ; a na-egosikwa ya n'oge ire ya.
Azụmaahịa nke imepụta uwe na-arụ ọrụ dị mkpa n'ụwa taa. Anyị na-etinye oge dị ukwuu na-anwa ịhọrọ uwe kachasị mma iji nwee ike ịbanye na obodo na ọnọdụ, nke na-ekwupụta ụdị uwe a ga-eji. N'ihi ya, e nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị na-asọ mpi na mpaghara a nke ahịa ma gbalịa ijide n'aka na ụlọ ọrụ ha nụrụ ma nwee ekele. Otú ọ dị, nke a adịghị mfe n ’ụdị asọmpi dị egwu dị otú ahụ. Iji nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma na mgbasa ozi na ịzụ ahịa, ọ dị mkpa ịmepụta njikwa zuru oke na usoro nke nzukọ ahụ. Ọ dị ezigbo mkpa ijide n'aka, na ihe niile na-eme n'usoro iwu kwadoro na ihe niile na-arụ ọrụ dịka atụmatụ ahụ si dị. Nanị ụzọ bara uru bụ iwebata akpaaka. Usoro kachasị mma maka imepụta uwe, dịka anyị kwurula, bụ ngwa USU-Soft. A na-emepe ya site na ndị mmemme kachasị mma nwere nnukwu ahụmịhe na ihe ọmụma na ngalaba mmemme.
Na akpaaka, ịkwesighi ilebara nlezianya nke ndị ọrụ anya, ego, uwe na ihe ndị ọzọ, ebe ọ bụ na usoro ego na-achịkwa nke mmepụta uwe na-achịkwa ya. Ihe ikwesiri ime bu ka inyocha akuko nke akuko komputa komputa n’eji akuko obula ichoro. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ijide n'aka na ndị ọrụ niile na-abanye data ziri ezi n'ime ngwa ahụ n'oge. Enweghị ya ọ gaghị ekwe omume ikwu banyere mkpa nke data abanye. Usoro ihe omume nke imepụta ihe na-ejikwa ụlọ nkwakọba ihe gị. Ọ bụrụ na enwere ụfọdụ ihe na-achọ ịgbapụ, mgbe ahụ usoro mmemme na-agwa gị gbasara mkpa ọ dị ịnye iwu wee zitere gị ozi. Naanị ihe fọdụrụ maka onye ọrụ ahụ nwere ọrụ bụ ịkpọtụrụ onye na-ebubata ya ma nyezie ihe ndị dị mkpa iji hụ na usoro ịmị uwe enweghị nsogbu. Dị ka anyị si mara, ọ dị ezigbo mkpa. Naanị awa ole na ole ịnọdụ ala nwere ike ịpụta nnukwu mfu.
Dịka ị pụrụ ịhụ site na edemede a, USU-Soft n'ezie nwere ọtụtụ nhọrọ bara uru iji nyere gị aka ịme azụmahịa ọ bụla nke ọma. Anyị na-akpọ gị òkù ka gị na ndị ọkachamara na ndị ọkachamara na USU-Soft, bụ ebe ị nwere ike ịjụ ajụjụ gị, họrọ nhazi ngwa ọrụ kachasị mma nke ụlọ ọrụ gị, ma nweta ohere ibudata ụdị nke ngwanrọ a na-akwụghị ụgwọ nke enwere ike ịnwale na ụlọ ọrụ.
Dị ka anyị niile mara, ezigbo onye ndu na-ama ihe na-eme n'ọgbakọ ya oge niile. O yiri ka ọ nweghị uru ị ga - ewe ndị ọrụ ọzọ ga - ejikwa ndị ọzọ na usoro niile. Ọ ka mma ịhọrọ onye enyemaka akpaaka nke nwere ike ịma ihe niile ma lelee ihe niile na-enweghị ezumike. Nke a bụ ihe teknụzụ ọgbara ọhụrụ na-enye iji. Yabụ, gịnị kpatara ị ga-eji jụ ụzọ dị etu a esi enyocha azụmahịa gị? Usoro nyocha nke USU-Soft bara uru n'ọtụtụ akụkụ. Ya bụ, gị ego gị na gbakọọ na pụrụ iche akụkọ na-mere. Ọzọkwa, ịmara ihe niile gbasara mgbasa ozi ma nwee ike ịkwaga nkwụghachi ego iji nweta ọwa mgbasa ozi n'ezie. N'ụzọ dị otú a ị na-adọta ndị ahịa gị site na iji usoro kachasị dị irè. Ihe anyị na-enye bụ naanị ngwaọrụ. Jiri ya mara ihe ma buru ndị asọmpi gị ụzọ! Anyị chọrọ ime ka nzukọ gị dịkwuo mma site na iwebata teknụzụ ọhụụ na-enweghị nke ọ ga-abụ ihe na-agaghị ekwe omume ịnọ na-ese n'elu ahịa ụbọchị ndị a.